Edinson Cavani Oo Xaqiijiyey Mustaqbalkiisa & Kooxda Uu Xilli Ciyaareedkan Ku Sugnaanayo - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaEdinson Cavani Oo Xaqiijiyey Mustaqbalkiisa & Kooxda Uu Xilli Ciyaareedkan Ku Sugnaanayo
Edinson Cavani Oo Xaqiijiyey Mustaqbalkiisa & Kooxda Uu Xilli Ciyaareedkan Ku Sugnaanayo
Weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani ayaa hadda si rasmi ah u xaqiijiyey mustaqbalkiisa xilli saacado kooban ka hadhsan yihiin waqtiga uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan oo caawa saqda dhexe lasoo xidhayo.
Manchester United ayaa maanta iibisay Daniel James oo 25 milyan oo Gini ay kula wareegtay Leeds United kaddib markii ay kooxdu shaacisay inay si rasmi ah ula soo wareegtay Cristiano Ronaldo oo laba sannadood oo heshiis ah qalinka ku duugay.
Kaddib heshiiska Ronaldo, waxa shaki la geliyey mustaqbalka weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani oo la sheegay in lambarka uu xidhan yahay ee No.7 looga saarayo Cristiano Ronaldo.
Barcelona ayaa sidii aanu idiinku soo gudbinay wararkii hore ee maanta diyaar u ahayd Cavani oo doonaysa inay la saxeexato iyadoo waliba qaab bilaash ah ku doonaysay, laakiin Manchester United ayaa u damaanad-qaaday laacibkan inuu qorshaheeda ku jiro, inkasta oo aan wali go’aan laga gaadhin in lambarka laga saarayo iyo in kale.
Si kastaba, Edinson Cavani ayaa hadda xaqiijiyey mustaqbalkiisa, waxaana qoraal sawir wata oo uu ku daabacay bartiisa bulshada uu ku sheegay inuu sii joogayo Manchester United.
Sawir uu xidhan yahay dharka cas ee kooxda Manchester United ayaa uu ku muujiyey inuu yahay ciyaartoy ka tirsan kooxda.